Tababare Zinedine Zidane oo weli doonaya inuu Paul Pogba kula soo biiro Kooxda Real Madrid – Gool FM
Tababare Zinedine Zidane oo weli doonaya inuu Paul Pogba kula soo biiro Kooxda Real Madrid
(Madrid) 11 Okt 2019. Sida wararku ay sheegayaan tababare Zinedine Zidane ayaa weli doona inuu kooxda Real Madrid kula soo biiro laacibka khadka dhexe ee Paul Pogba.
Ku guuleystaha koobkii Adduunka 2018 ee Paul Pogba ayaa isaga tagi kara kooxdiisa Manchester United.
Inkastoo kooxda Real Madrid si xoog leh loola xiriirinayo laacibka Tottenham ee Christian Eriksen, haddana tababarahooda Zinedine Zidane ayaa caddeeyay in dooqiisa ugu weyn ee uu ku xoojinayo khadkiisa dhexe inuu noqon lahaa laacibka Manchester United ee Paul Pogba.
Shabakadda ciyaaraha ee ESPN ayaa warinaysa in tababaraha kooxda Real Madrid uu doonayo in ninka ay isku waddanka yihiin uu ku soo biiro garoonka Bernabéu, wuxuuna aamisan yahay in Paul Pogba uu doonayo inuu u soo dhaqaaqo caasimadda Spain ee Madrid.
Kooxda Chelsea oo hoggaaminaysa raacdada loogu jiro Ben Chilwell… (Miyey saxiixiisa ku garaaci doontaa Manchester City?)
Miyuu Thomas Muller bisha Janaayo ka tagayaa Bayern Munich, xilli ay xiisaynayaan qaar ka mid ah Kooxaha waa weyn ee Premier League?